शिक्षण अस्पतालमा हेलिप्याडसहित अत्याधुनिक सुबिधा युक्त भवन बन्ने - Nepal News - Latest News from Nepal
शिक्षण अस्पतालमा हेलिप्याडसहित अत्याधुनिक सुबिधा युक्त भवन बन्ने
१ साउन, काठमाडौं । त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जले हेलिप्याडसहित अत्याधुनिक १० तल्ले भवन निर्माणको तयारी सुरु गरेको छ । भवन निर्माणका लागि अस्पताल र भाटभटेनी सुपर मार्केटबीच लिखित समझदारी भएको निर्देशक डा। दीपक महराले जानकारी दिए ।
इमर्जेन्सीनजिकै हाल सुरक्षा गार्ड बस्न बनाइएको विल्डिङ्गलाई भत्काएर १० तल्ले भवन बनाइनेछ । भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले आफ्ना आमाबाबुका नाममा बनाइदिन लागेको यो भवनमा विस्तारित स्वास्थ्य सेवा ९इएचएस० मात्र सञ्चालन गर्ने योजना रहेको अस्पतालका निर्देशक डा. महराले बताए ।
डा. महराका अनुसार हाल अस्पतालमा दैनिक ओपिडीमा १६ सयदेखि दुई हजार विरामी आउने गर्छन् । त्यस्तै इमर्जेन्सीमा १५० भन्दा बढी विरामी आउने गर्छन् । त्यसबाहेक शिक्षण अस्पतालमा विशेष किसिमका ११ वटा सघन उपचार कक्ष(आईसीयू) का साथै ५६ वटा आईसीयू पनि सञ्चालनमा छ ।
‘जब भाटभटेनीले भवन निःशुल्क बनाइदिँदैछ र त्यसमा सुविधा दिन्छु भनिरहेको छ भने हामीले उहाँहरुको शर्त मान्छौं भनेका छौं’, डा। महराले भने ।
दक्षिण कोरियाको कमदरको तलब न्यूनतम १६.४ प्रतिशत बढ्ने
परशुराम नगरपालिकाको प्रथम नगरसभाले ४० करोड २९ लाख ९ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरे